အရှင်လောကပါလ: ခရစ်တော်နှင့် အိန္ဒိယ ဒဏ္ဍာရီ
ခရစ်တော်နှင့် အိန္ဒိယ ဒဏ္ဍာရီ
ကမ္ဘာကြီးက ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ကို ကျင်းပနေချိန်မှာ ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ရဲ့ ပက်သက်မှုကို လူတွေ သတိထားမိလာကြ ပြန်ပါတယ်။ အချို့ သမိုင်းပညာရှင်များက ယေရှုခရစ်တော်ဟာ သူ့ရဲ့ အသက် (၁၂) နှစ်ကနေ (၃၀) နှစ်အထိ နှစ်ပေါင်း (၁၈)နှစ်လုံးလုံး အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓစာပေနဲ့ ဝေဒစာပေတို့ကို လေ့လာ သင်ယူခဲ့ကြောင်း ယုံကြည်ကြပါတယ်။ “ခရစ်တော်ရဲ့ မိဘတွေဟာ နာဇရက်သ် (Nazareth) မြို့မှာ နေထိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ကြိမ် သူ နာဇရက်သ်မြို့မှာ ပြန်ပေါ်လာတော့ အသက် (၃၀) ရှိနေပါပြီ။ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အချိန်အတောအတွင်း သူဟာ အသိဉာဏ်ပိုင်းနဲ့ ဂုဏ်သတင်း တက်နေပြီလို့ ယူဆရပါတယ်” အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ ကန့် ဝဲလ်ဝင်း က Indo Asian News Service ကို ပြောပြပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်ရဲ့ ဒယဝတီ မိုဒီ အနုပညာဆုရှင် ဝဲလ်ဝင်းရဲ့ နောက်ဆုံး လက်ရာဖြစ်တဲ့ ‘Young Jesus: The Missing Years’ ဆိုတဲ့ ဒီ ရုပ်ရှင်ကားဟာ သမ္မာကျမ်းစာ (ခရစ်ဝင်ကျမ်း) မှာ ဖော်ပြမထားတဲ့ ခရစ်တော်ရဲ့ အစောပိုင်း နှစ်ကာလများကို စူးစမ်း ဖော်ထုတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝဲလ်ဝင်းရဲ့အဆိုအရ သူရိုက်ကူးမယ့် ဒီရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဟာ အသက် ဆယ့်သုံးနှစ်၊ ဆယ့်လေးနှစ်တုန်းက ယေရှုခရစ်တော်ကို အာရှအနောက်ပိုင်းမှာ နောက်ဆုံး မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သမ္မာကျမ်းစာရဲ့အဆိုကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားရဲ့ ပထမပိုင်းကို သမ္မာကျမ်းစာကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပြီး ဇာတ်လမ်းရဲ့ ဒုတိယပိုင်းကတော့ သမိုင်းဝင် စာပေ အထောက်အထားအပေါ် အခြေပြုတဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်း သက်သက်နဲ့ ရိုက်ကူးမှာဖြစ်ကြောင်း ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူက ပြောပြပါတယ်။
ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ အိန္ဒိယ အဆက်အသွယ် ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထား အများအပြား ရှိပါတယ်။ ရုရှားလူမျိုး ဂျာနယ်လစ် နီကိုလက်စ် နိုတိုဗစ်ခ်ျ (Nicolas Notovitch) ဟာ ၁၈၉၄- ခုနှစ်မှာ အာဖကန်နစ္စတန်၊ အိန္ဒိယနဲ့ တိဘက်နိုင်ငံတို့ကို သွားခဲ့တဲ့ သူရဲ့ခရီးစဉ်အပေါ် အခြေခံပြီး ရေးသားခဲ့တဲ့ “The Unknown Life of Christ” ဆိုတဲ့ စာအုပ် တစ်အုပ် ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ လာဒက်ခ် (Ladakh)ရဲ့ မြို့တော်ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ခြေထောက် ကျိုးသွားလို့ ဟေမိစ် (Hemis) တိဘက် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးမှာ အချိန်အတော်အကြာ နေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ တိဘက်လို ရေးထားတဲ့ “The Life of Saint Issa” ဆိုတဲ့ ထူထူထဲထဲ အဝါရောင် မှတ်တမ်းစာအုပ်ကြီး နှစ်တွဲကို သူ တွေ့ခဲ့တယ်။ မူစလင်တို့ရဲ့ ကိုရမ်ကျမ်းမှာ ခရစ်တော်ကို Isa လို့ ခေါ်ဝေါ်ပါတယ်။ နိုတိုဗစ်ခ်ျဟာ မှတ်တမ်း စာအုပ်ကြီးတွေထဲက အပိုဒ်ပေါင်း နှစ်ရာကျော်ကို ကူးမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့မှတ်တမ်းဟာ နောက်ပိုင်း အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အတော် ဂယက်ရိုက် ခဲ့ပါတယ်။
လာဒက်ခ်မြို့တော်နဲ့ ကီလိုမီတာ လေးဆယ်အကွာ တောင်ပေါ်မှာ တည်ရှိတဲ့ ဟေမိစ် တိဘက် ဘုန်းကြီးကျောင်းက ရဟန်းတော်တွေကလဲ ယေရှုခရစ်တော် အိန္ဒိယကို လာရောက် ပညာ သင်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဒဏ္ဍာရီကို အတည်ပြု ထောက်ခံကြပါတယ်။ “ဗုဒ္ဓစာပေ လေ့လာဖို့အတွက် ယေရှုခရစ်တော်ဟာ ဘုန်းကြီးတို့ ဒေသ (Ladakh) နဲ့ ကက်ရ်ှမီးယားကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်” ဟေမိစ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရဲ့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်က IANS ကို ပြောပြတာပါ။
ဘင်္ဂါလီ ဘာသာရေး ပညာရှင်နဲ့ ရှေးဖြစ်ဟောသူ ဆွာမိ အဘေဒနန္ဒ ဟာလည်း ခရစ်တော်နဲ့ အိန္ဒိယခရီးစဉ် ဒဏ္ဍာရီကို စူးစမ်းဖို့ ဟိမဝန္တာ တောင်းတန်းတွေဆီ ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့ “Kashmir O Tibetti” ဆိုတဲ့ ခရီးသွားမှတ်တမ်း စာအုပ်ကလဲ လာဒတ်ခ်က ဟေမိစ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ခရစ်တော် လည်ပတ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောပြထားပါတယ်။ (တိဘက် ကျောင်းတွေကို လာလည်တဲ့ ဧည်သည်တွေအနေနဲ့ မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးကြရတဲ့ ဓလေ့ ရှိပါတယ်။) သူ့ရဲ့စာအုပ်မှာ နိုတိုဗစ်ခ်ျ ကူးခဲ့တဲ့ သူတော်စင် အိစ္စာ (Issa) ရဲ့ ဒဏ္ဍာရီအကြောင်း (၂၂၄) ပိုဒ်ပါတဲ့ ဘင်္ဂါလီဘာသာပြန်ကိုလဲ ထည့်သွင်း ထားပါတယ်။
၁၉၂၅- ခုနှစ်မှာ ရုရှားလူမျိုး နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒဿနနဲ့ သိပ္ပံပညာရှင် နီကိုလက်စ် ရိုအိရစ်ခ်ျ (Nicholas Roerich) ဟာလဲ ဟေမိစ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့ပြီး ခရစ်တော်ရဲ့ ဒဏ္ဍာရီကို မှတ်တမ်း တင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မှတ်တမ်းထဲမှာ ရိုအိရစ်ခ်ျက အခုလို ဆိုခဲ့တယ် “ယေရှုဟာ ဗာရာဏသီ၊ ဝေသာလီစတဲ့ အိန္ဒိယ ရှေးဟောင်း မြို့တော်တွေမှာ အချိန်အတော်ကြာ နေထိုင်ခဲ့တယ်။ သူဟာ ကုန်သည်တွေ၊ ဆင်းရဲသားတွေကို လမ်းညွှန် ကူညီပေးပြီး အေးအေးဆေးဆေး နေထိုင်ခဲ့လို့ လူတိုင်းက သူ့ကို ချစ်ကြတယ်”
သမိုင်းပညာရှင်တွေနဲ့ စာရေးဆရာတွေရဲ့ အဆိုအရ အိန္ဒိယရှေးဟောင်း မြို့တော်တွေမှာ ဟောကြားခဲ့တဲ့ ခရစ်တော်ရဲ့ ဟောပြောချက်တွေက ဗြာဟ္မဏ (ပုဏ္ဏား) တွေကို အမြတ်ထွက်စေခဲ့တယ်။ ဒီအကြောင်းကပဲ ဟိမဝန္တာတောင်တန်းတွေဆီ ထွက်ခွာဖို့ အကြောင်းဖန် လာခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်တော်ဟာ ဗုဒ္ဓစာပေ သင်ကြားရင်း ဟိမဝန္တာ တောင်တန်းဒေသမှာ နောက်ထပ် ခြောက်နှစ် အချိန်ကို ကုန်လွန်စေခဲ့ကြောင်း သမိုင်းဝင် စာပေ အထောက်အထားတွေက ဆိုပါတယ်။ ဂျာမန်ပညာရှင် ဟောလ်ဂါ ကာစတင် (Holger Kersten) ရဲ့ “Jesus Lived in India” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလဲ အိန္ဒိယက ခရစ်တော်ရဲ့ ငယ်စဉ်က ဘဝအကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ ကင်စတင်က သူ့ရဲ့ စာအုပ်မှာ အခုလို ဆိုထားပါတယ် “လုလင် ယေရှုဟာ ဆင်းနယ်ကို ကုန်သည်တွေနဲ့ အတူ လိုက်ခဲ့တယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမ ဩဝါဒတွေကို သင်ယူရင်း ပြီးပြည့်စုံသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ အာရိယန်းတွေကြားမှာ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပန်ဂျပ်နယ်အနှံ့ ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တယ်။ ဂျဂန်နက်ကို မထွက်ခွာခင် ဂျိမ်းဘုန်းကြီးတွေနဲ့ ခဏတဖြုတ် နေခဲ့ပါသေးတယ်”
မှတ်ချက်။ ။ www.calcuttanews.net က သတင်းကို ဘာသာပြန် ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ သတင်းနဲ့ ပက်သက်တဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်စတဲ့ အထောက်အထားတွေကို ကာလာနဲ့ လင့်ချိတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ ကလစ်နှိပ်ပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ခရစ်တော်ရဲ့ ပျောက်ဆုံးနေသော နှစ်များနဲ့အကြောင်းကို ပညာရှင်တွေအကြား အမျိုးမျိုး ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပက်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုလည်း မြန်မာ့ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအဖွဲ့ (MTBG) ဆိုက်မှာ တွေ့ရပါတယ်။ အထက်က ဘာသာပြန် သတင်းနဲ့ ကွဲပြားနေတာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဆိုက်ရဲ့ မန်ဘာတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ကိုကိုတာက အရှင်အရိယဓမ္မရဲ့ ဗုဒ္ဓဝါဒပြဿနာများ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲက မေးခွန်းနံပါတ် (၁၂) ကို တိုက်ရိုက်ကူး စာစီပြီး ဝေငှထားတာပါ။ အဲဒီဆောင်းပါးကိုပဲ (MTBG)ဆိုက်မှာ ဖတ်ရတာ သိပ်အဆင်မပြေရင် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ကြီးရဲ့ (A.B.M.A) ဘလော့မှာ သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ တောင်တွင်းကြီး အရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ တပည့်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အရှင်အရိယဓမ္မရဲ့ မူရင်း ဗုဒ္ဓဝါဒပြဿနာများ စာအုပ်ကို ဖတ်ချင်ရင်တော့ လင့်ပေါ်မှာ ကလစ်နှိပ် ဒေါင်းလုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ခရစ်တော်နဲ့ အိန္ဒိယ ဒဏ္ဍာရီအကြောင်းကို ပညာရှင်အသီးအသီးက ထင်မြင်ချက် အဖုံဖုံ ပေးထားကြပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာကို ကျေညက်အောင် ဖတ်ထားပြီး သမိုင်းဝင် အထောက်အထားတွေကို ဂဃနဏ သိအောင် လေ့လာထားသူများ အနေနဲ့ ဒီ ဒဏ္ဍာရီဟာ အမှန် ဟုတ်၊ မဟုတ် ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်တော်ရဲ့ ဟောပြောချက်တွေက ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေနဲ့ အရမ်းနီးစပ်နေတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အောက်က ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေကို ကြည့်အပြီးမှာတော့ စာဖတ်သူအနေနဲ့ ယေရှုနဲ့ အိန္ဒိယ ဒဏ္ဍာရီအပေါ်မှာ တစ်ခုခု မှတ်ချက် ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပပါတယ်။
Where Was Jesus For 18 Years? Missing In Bible Part 2/2
Did Jesus Christ learn Buddhism??
Posted by Ashin Lokapala at 29.12.09
အရှင်ဘုရား ..တပည်.တော်လည်း ဒီအကြောင်းကို ငယ်စဉ်ကစာအုပ်တစ်အုပ်မှာဖတ်ရှုဘူးပါသည်။ ယေရှုခရစ်ဟာ တိဘတ်မှာ တရားကျင်.ကြောင်း ဆိုသည်များပါ......အသေအချာမမှတ်မိတဲ.အတွက်အဲဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုပဲ
ခေါင်းထဲတွင်စွဲမြဲနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်.......အခုလို ပြည်.ပြည်.စုံစုံသိရသည်.အတွက် ကျေးဇူးအရမ်းတင်ရှိပါတယ်ဘုရား......တပည်.တော်ရိုသေစွာဖြင်. ရှိခိုးကန်.တော.ပါတယ်ဘုရား........
tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း said...
တပြည့်တော် အကြိမ်ကြိမ် ရောက်ပါတယ်ဘုရား
သိကြားစေ သက်သေညွှန်း said...
Thet Hlan Htet said...
မိမိတို့၏ ထင်မြင်ချက်၊ အယူအဆတို့ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးသားနိုင်ပါသည်။
အမေရိကန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ခရစ္စမတ်ပွဲတော် ပါဝင်ဆင်နွှဲ...
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘာသာရေးဆု ပြဿနာ
ဝေဖန် အကြံပြု ဆွေးနွေးလွှာ
Myanmar Books Catalogue (Alpha)
မြန်မာ=အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန် (ဒေါင်းလုတ်)
မြန်မာ့ သတင်းဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာအဖွဲ့
Guide to Buddhism A to Z (S. Dhammika)
Suttacentral (Excellent Link)
Tipitaka Pali Canon (Pali+English)
အနတ္တလက္ခဏသုတ် (ပါဠိ၊ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်)
ဓမ္မပဒ (ပါဠိ၊ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်)
တိပိဋက (ပါဠိ၊ မြန်မာ)
English Translation of Pali Commentaries
Full Length Documentaries and Interviews
News Now (Burma)
Prof. David Acore
ထိပ်တန်း မြန်မာဘလော့ဂ် (၅၀)
တရားတော်များ (MP3 @ VCD)
ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် အခြားဘာသာကြီးများ Access To Insight American Buddhist Australia Buddhism Bhavana Society Birmingham Vihara Buddha Mind Cologne Buddhists BuddhaNet Buddhism in France Buddhism in Switzerland New South Wales Australia Cambodia Uganda Buddhist Center Dhamma Download Dhamma Net Dhamma Study Diamon Gautama Buddha Germany Buddhist Houston Buddhist London Vihara Metta Net New York Nibbana The Buddhist Society Vipassana Washington Vihara ATBU Oxford Buddha Vihara Shan Sangha in SL Buddha Tooth Relic (Kandy) ****What the Buddha Taught*****
ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာသတင်းမီဒီယာများ Ashin Mettacara.Com Ashin Mettacara.OrgBurma Lawyers' Council DVB BBCBurmese RFA VOA YAMC သစ္စာ ရိုးမ ၃ ဟစ်တိုင် ဧရာဝတီ ခေတ်ပြိုင် နေရဉ္ဖရာ ယနေ့ မြန်မာ မြန်မာတီးရှော့(ပ်) အရှင်မေတ္တာစာရ မဇ္ဈိမသတင်းဋ္ဌာန မြန်မာ့သတင်းဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ
Copyright © 2009 အရှင်လောကပါလ . Blogger Templates created by Deluxe Templates | Wordpress Theme by Online Best Deals.